निर्मला हत्या प्रकरण : पक्राउ परेका रावलले हत्या स्वीकार गर्दै सिआइबीलाई दिए यस्तो बयान ! « Janaboli
निर्मला हत्या प्रकरण : पक्राउ परेका रावलले हत्या स्वीकार गर्दै सिआइबीलाई दिए यस्तो बयान !
काठमाडौ । कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको हत्याको घटनामा काठमाडौंवाट पक्राउ परेका प्रदीप रावलले हत्यामा आफ्नो संलग्नता स्वीकार गरेका छन् । उनले प्रहरीसंगको बयानमा आफुले हत्या गरेको स्वीकार गरेका हुन् । निर्मलाको साउन ११ गते बलात्कार पछि हत्या गरिएको अवस्थामा शव फेला परेको थियो । घटना भएको चार महिना बितिसक्दा पनि हत्यारा पत्ता नलागेपछि प्रहरी प्रमुख आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल यो घटनामा आफै संलग्न भएर अनुसन्धान सुरु गरेका छन् ।
सीआईबीले रावलसँग गएराति १० बजेदेखि २ बजे बिहान सम्म बयान लिएको थियो। सोही क्रममा रावलले घटनामा आफ्नो संलग्नता स्वीकार गरेका हुन्। घटना स्वीकार गरेपछि प्रहरीले रावलको डीएनए परीक्षणका लागि प्रहरी प्रयोगशालामा पठाएको छ।
यसको रिपोर्ट भने शुक्रबार मात्र आउने छ। निर्मलाको छिमेकी रहेका उनी निर्मलाको हत्या भएपछि हराएका थिए । उनका बुवा आमा भने भारतमा बस्दै आएका छन् । उनलाई पनि भारतमै रहेको बताइएको थियो ।